I-Pibonexia-Iingcebiso kunye nomnqweno emadodeni anesitayile | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | yokuPhila, Te knoloji, Imizila
Kukho abantu ukuba ubuhle bokwenene buchazwa, njengabantu abahlukileyo kunye nothando olungenamiqathango kwabo bangaziva. Ngaba ungomnye wabo bantu? Ngaba uziva uluthando lokuzithanda olwenza ukuba nomona kwabanye?
Kulungile ke ibonakala namhlanje ngenethiwekhi yethu yoluntuKukho abantu abaninzi kunye namanani oluntu abonisa lo mfanekiso wokuvela kwinto engaphaya kwento abanokuyiprojekthi. Ukuba namhlanje ukungabikho kokuzithemba ebantwini abaninzi kuyanqumama, umfanekiso obuyiswe umva nge 'pibonexia' yile jongeka njengomntu ogqibeleleyo, kwaye iya isiba ngcono, kunokuba bebenokuvavanywa ngenene.
Ostation, inkohliso, fantasy
1 Kutheni ibizwa ngokuba 'pibonexia'?
2 Abalinganiswa abaziva 'pibonexia'
3 Kutheni le nto "ukunconywa" kukonyusa ukuzazisa?
Kutheni ibizwa ngokuba 'pibonexia'?
Eli gama laveliswa nguSusi Caramelo, Umhlekisi kunye nentsholongwane yenkwenkwezi enegalelo kumdlalo 'Ezo bezilahlekile '. Kwi-monologue ucacisa ukwenziwa kweli gama njengengxaki ephakamisa kakhulu abantu kunye nosaziwayo e-United States, kodwa nakwamanye amazwe nakwamanye amazwe afana ne-Spain.
Ingqiqo yeli gama yalatha kwingcinga yokuba kukho abantu abaziva behle kakhulu ukusuka kuyo oko kukuthi. Bakholelwa ukuba banomzimba ogqibeleleyo, banomzimba nobuso obunomona, kwaye nokuba bayaxelelwa ukuba abakho, bakholelwa okwahlukileyo.
KuSusi, 'i-pibonexia' yenziwa ngokulandelelana kakhulu kwinethiwekhi yoluntu, ngakumbi kwi-Instagram. Uninzi lwabantu abadumileyo lubalaselisa inxenye yobuhle babo kwaye bayayibaxa ngokubonisa kakhulu umfanekiso wakho Kugqithisile, kunye nokuthinta kunye nokuloyisa inkohliso ukubonakala ugqibelele. Yeyona nto iphambili kubo, babambeke ngohlobo lokuba babenze babe sisicwangciso sabo esifanelekileyo sokuvela ukubonwa kwabo okuhle kunye ne-narcissism.
Abalinganiswa abaziva 'pibonexia'
USusi Caramelo naye uziva epibonexia. Wazibonakalisa ngokwakhe kunye nodliwanondlebe wavuma ukuba yena "ushushu ngalo lonke ixesha." Ngokubanzi, bonke abantu abanolu mgangatho baziva bethandwa, Bayazi ukuba abaweli ngaphakathi kweemfundiso ezisekwe luluntu, kodwa kunjalo Bacinga ukuba balunge kakhulu.
UDonal Trump yinkwenkwezi engenakuphikiswa ngubani othanda ukubonisa umfanekiso wakhe. Uhlala ewubaxa umfanekiso wakhe kwaye ade waya kufakela imifanekiso engangqinelaniyo nenyani, apho ibonakala ngemizimba eguqulweyo okanye ehlaziyiweyo yi-Photoshop. Ngaphandle kwamathandabuzo, iinethiwekhi zentlalo yinjongo yakhe, athanda ngayo ukugcina umfanekiso wakhe. Nangona namhlanje enomzabalazo wobulungisa ngokumvavanya kumaqonga awahlukeneyo.
UDavid Guetta Ungomnye wabantu abathanda ukuzibonakalisa njengeyona nto ibalaseleyo. Le DJ's idumileyo kwaye yenye yezona zaziwa kakhulu, ikwafaka iifoto zayo kuthungelwano lwentlalo ithatha olona hlobo lwayo lubalaseleyo nangaphezulu ukwandiswa ngokuchukumisa.
Ezithandwayo Kim Kardashian ngomnye wabantu abadumileyo abanesidima 'pibonexia'. Nguye yedwa owaziyo ngo iifoto zakhe kunye nemizobo yeyona nto ayithandayo kwaye ngaphandle kwakhe i-Instagram ngekhe ibeyinto ngaphandle kwesixa sabantu bajoyine injongo yabo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukwabonakala ngokubamba okungashiyi ngaphandle kwamathandabuzo ukuba kukuqaqambisa indawo ethile okanye ukuphucula ubuhle bezinye zeempawu zakhe.
Umgca udityaniswe nabanye abantu abadumileyo abanjengo Kylie Jenner ebizwa njengoyena mncinci kumaKardashians apho athe wancinwa ngokubamba kwakhona iifoto zakhe ukuze zibonakale zinomtsalane ngakumbi kunokuba zinjalo. Kendall Jenner Kolu luhlu ngabo bangenazintloni batshintsha iifoto zabo.
Kutheni le nto "ukunconywa" kukonyusa ukuzazisa?
Kubo bonke abantu abadityaniswe neenethiwekhi zentlalo kwaye babonisa imizimba yabo ngabo, ngabantu abo kuxhomekeke kubuthathaka bokuzithemba kwabo. Basebenzisa iinethiwekhi ukwenza fumana "ukuthanda" kwaye ke bayile imeko yabo yoxolo kunye yomeleza ukuzazisa kwakho.
Kutheni lento isenzeka? Ewe, nangona kuyakhuthaza ukuthi abantu abane-pibonexia bancoma imizimba nengqondo yabo ngokugqithileyoBayakuthanda ukufumana "ukuthanda" okuninzi kubantu ababathandayo ukuphakamisa ukuzithemba kwakho ngakumbi. Bayayidinga loo nto yokutya ukuze bafumane isiqabu kunye nokwamkelwa eluntwini.
Kwaye njengoko sele sazi, uninzi lwaba bantu luyozama ukuya phambili kakhulu usebenzisa izihluzi kunye nokugqwetha imbonakalo yayo yokwenyani. Ngokwenyani, baveza ubuntu babo, kodwa kwangaxeshanye bahanjiswa njengento esempilweni kwaye eyonwabisayo.
Nangona kunjalo ngokwemiqondo yengqondo asazi ukuba oku kusempilweni ekuhambeni kwexesha. Ukugqwetha umfanekiso obonisiweyo kunye neefilitha ezininzi okanye iFotohop akuncedi kakhulu ekuphakamiseni ukuzithemba, kodwa kunokukhokelela kolunye uhlobo lokuphazamiseka kwengqondo ngomso.
Iinethiwekhi zentlalo zezona zixhobo zibalaseleyo ukuze sikwazi ukumela icandelo lethu. Kuxhomekeke kuthi kwaye ngokobuqu ukuba sikwazi ukuyisebenzisa siyisebenzisa kakuhle nangokufanelekileyo. Uninzi lusola oko 'pibonexia' ayigqibi ukuba ngumthombo olungileyo ukuba ekuqaleni kunokuba mnandi kwaye ekugqibeleni kuchaphazela ukuqonda kwethu komzimba kunye nokuzithanda kwethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Te knoloji » IPibonexia
Umlingane wam akenzi izicwangciso kunye nam
Hypertonia: yintoni na, iintlobo kunye neempawu